“glacière” hitahirizana ny vaksiny any amin’ny CSB : mitera-doza ho an’ny fahasalamana | NewsMada
“glacière” hitahirizana ny vaksiny any amin’ny CSB : mitera-doza ho an’ny fahasalamana
Mampiasa vata fampangatsiahana ny tomponandraikitry ny CSB rehefa hitahiry ny vaksiny hozaraina amin’ny ankizy sy ny vehivavy mitondra vohoka. Hisorohana ny olana amin’ny famatsiana solitany ny vata fampangatsiahana any amin’ny toerana tsy tongan’ny herinaratra, novana ho vata fampangatsiahana mandeha amin’ny herin’ny masoandro no ampiasaina any ambanivohitra lavitra. Tsy izay anefa ny zava-misy amin’ny CSB sasany toy ny hita any amin’ny Sampandraharahan’ny fahasalamana, any amin’ny distrika Andramasina (CSB 1 Mangabe, CSB2 Anosibe Trimoloharano, CSB 2Tankafatra). Vata fampangatsiahana kely fampiasa any an-tokantrano hitehirizana zava-pisotro (glacière) no hitehirizana vaksiny ho an’ny kaominina iray. Ahitana izany tranga izany koa any amin’ny SSD Toamasina I, Vatomandry, Mahanoro, Marolambo, Nosy Varika. Fitaovana fampangatsiahana kely 40 any ho any no efa naparitaka amin’ny CSB, araka ny fanazavana azo.
Tsy voahaja ny maripana 2°-8°C
Tsy mahafeno ny fepetra takian’ny Sampandrahahan’ny firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS) ny vata fampangatsiahana kely mandeha amin’ny herin’ny masoandro nasolo ny réfrigerateur mahazatra sy mahomby. Tsy voahaja ny fenitra ara-pahasalamana fitehirizana ny vaksiny amin’ny maripana 2 sy 8°C.
Vokany, mety hitera-doza ho an’ny ankizy na olona homena ny vaksiny izany tsy fahatomombanan’ny maripana hitehizirana azy izany, hoy ny mpitsabo. Tsy mahazaka vaksiny betsaka ihany koa ilay vatakely satria tsy natokana ho amin’izany, ka mety tsy haharaka ny filana misy, indrindra mandritra ny hetsika fanaovam-baksiny faobe atao indroa isan-taona amin’ny Herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza sy vaksiny, iarovana amin’ny poliomelita indroa isan-taona.
Nanamafy ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fahasalamana, fa vata fampangatsiahana manaraka ny fenitra no napetraka eny amin’ny CSB fa tsy glacière velively.
Nilaza ny hanao fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka hahitana ny tena marina.